Al-Shabaab oo sheegay in Sarkaal ka tirsan Booliska Kenya ku dileen Gobolka Xeebta – STAR FM SOMALIA
Afhayeenka howl galada Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in weeraradaas oo isugu jiray qaraxyo iyo kuwo toos ah ay la beegsadeen ciidanka Kenya, isla markaana khasaare ku gaarsiiyeen.
Abuu Muscab ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay deegaanka Witu ee Jaziirada Lamu, waxaana uu tilmaamay inay ku dileen sarkaal ka tirsan booliska Kenya.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in gaadiid ka tirsan ciidanka booliska Kenya ku gubeen, markii qarax la beegsadeen sida uu yiri.
Saraakiisha Kenya ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah saraakiisha Booliska lagu dilay weerarka.Al-Shabaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay kordhiyay weerarada ay ka geysanayeen gudaha Kenya, waxaana deegaanada gobolka xeebta ay ahaayeen halka ay weerarada uga badan ka geysanayeen.
Axmed Maxamed Laxoos (Axmed Mashruuc) oo loo doortay madaxweyne maamul loogu macagtaray Bakool Sare